बहुमत पाएको दलबाट नै संविधानको अवमुल्यन : राप्रपा - नेपालबहस
बहुमत पाएको दलबाट नै संविधानको अवमुल्यन : राप्रपा
| १८:५६:०५ मा प्रकाशित
२५ माघ, पाँचथर । सत्तारुढ दल सत्ता र स्वार्थमा लिप्त हुँदा स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा जारी जनादेशको अवमूल्यन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरुले बताएका छन् ।
‘देशको इतिहासमा यति ठूलो बहुमत हालसम्म कसैले पाएको थिएन । तथापि जनताको चाहना विपरीत, कुर्सीको लागि राजनीतिक विकासक्रमलाई अध्याँरो सुरुङमा छिराउने प्रयास भयो, जनादेशको मानमर्दन गरियो,’ राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मानदेव केरुङले भने ।
‘त्यसैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुढृद तुल्याउन नयाँ शीराबाट अघि बढ्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनचाहना बमोजिम अबको विकल्प भनेकै दलभन्दा माथि रहने निष्पक्ष राजसंस्था हो, सबै धर्म, आस्था, परम्परा अटाउने सनातन हिन्दुराष्ट्र हो,’ फिदीम नगरपालिका वडा नं १२, नांगीनमा सम्पन्न पार्टी भेलालाई सम्बोधन गर्दै केरुङले भने ।
सम्बोधनकै क्रममा जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार जोशीले राप्रपा अब जनतामाझ क्रियाशील रहने बताए । ‘देशको आवश्यकता, जनताको चाहना पूरा गर्न युवा पुस्तासँग हामी हातेमालो गर्नेछौं । देशव्यापी देखिएको जनलहर अनुरुप देशलाई सही मार्गमा अघि बढाउन राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मागलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछौं,’ अध्यक्ष जोशीले भने ।
सोही अवसरमा डा. डिल्लीप्रसाद चापागाईको अध्यक्षतामा राप्रपाको वडा नं १२ को वडा कार्य समिति पूनर्गठन गरियो । जिल्ला उपाध्यक्ष नरबहादुर लावती, फिदिम नगर अध्यक्ष राजकुमार सम्बाहाम्फेले पूनर्गठित एघार सदस्य वडा कार्य समितिलाई सफलताको शुभकामना दिए । वडा भेला गुर्जमान गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
ओलीको स्वेच्छाचारिता अन्त्यका लागि निर्वाचन आवश्यक : थापा १ दिन पहिले
राप्रपा अध्यक्ष जबराले दिए प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना ५ दिन पहिले
तर ऊ त कुकुर नै रहेछ ! ४ घण्टा पहिले
रामकृष्ण ढकाललाई सानुको याद आयो १४ घण्टा पहिले
नागरिक लगानी कोषले साढे ३ लाख कित्ता हकप्रद शेयर लिलाम बिक्री गर्दै, कसले आवेदन दिन पाउने ? १५ घण्टा पहिले
नेप्सेको सिस्टममा समस्या, निफ्रा शतप्रतिशत घट्दा नेप्से ५७ अंक घट्यो १३ घण्टा पहिले
सङ्घर्ष गरेर पढिरहेका छोरीहरू १५ घण्टा पहिले
विघटनको अधिकार छैनः वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल ७ दिन पहिले
विरोधसभाको जनसहभागिताले पार्टीमा उत्साह थप्याे : देउवा १ हप्ता पहिले
शुक्रबार पूर्वरानी कोमल शाहको जन्मदिन मनाइदै ६ दिन पहिले
सरकारी कार्यालयमा ‘ट्राफिक नियम’ ५ महिना पहिले
संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि आन्दोलन : प्रचण्ड १ हप्ता पहिले
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सफ्टवेयर खरिद गर्दै एनआईसी एशिया बैंक १ वर्ष पहिले